★မြန်မာ့အလင်း★: မြစ်နားရွာ အနီးရှိ နီလာစေတီတော် ဌာပနာ ဖေါက်ထွင်းခံရ
မြစ်နားရွာ အနီးရှိ နီလာစေတီတော် ဌာပနာ ဖေါက်ထွင်းခံရ
မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီသတင်းကို ဖတ်ရတာ ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ? (မြန်မာဆိုသည်မှာ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ရခိုင်၊ ဗမာ အားလုံးကို ဆိုလိုသည်) မြန်မာအများစုကတော့ ဆရာကြီးပမာ ဘေးကနေ သုံးသပ်မှုတွေလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အတင်းပြောမယ်၊NLD ကို ဝေဖန်မယ်၊ နအဖ ကို အပြစ်တင်မယ်။ အဲလိုစောက်တင်းပြောတာကို ပြည်သူ့သဘောထားဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်လှလှလေးကလဲ တပ်ချင်သေးတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ နအဖ၊ ဒီမို၊ ရခိုင်၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ ကရင် ဘယ်သူ့စကားကိုမှ အထင်မကြီးဘူး။ (ရှင်းရှင်းပြောလို့မခံနိုင်ရင် စာဆက်မဖတ်နဲ့) ဘယ်သူ့စကားကိုမှ အလေးမထားပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် မြန်မာတွေဟာ အများအကျိုးနဲ့ ပတ်သက်ရင်ဘာမှမလုပ်ပဲ ခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေကို သုံးသပ်ဝေဖန်နေတာပဲ လုပ်နေကြတာမဟုတ်ပါလား? ကျုပ်တို့က ဗမာတိုင်းရင်းသားအစစ်တွေ။ ခင်ဗျားဟာ ဗမာတိုင်းရင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်. . တခြားတိုင်းရင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ် ဂရုကို လုံးဝမစိုက်ဘူး။ တကယ်လို့ အများအကျိုးအတွက် လုပ်ဆောင်တဲ့သူဆိုရင် ဘာတိုင်းရင်းသားပဲဖြစ်ပါစေ လေးစားပါမယ်။ အရိုအသေပေးပါမယ်။
နအဖ စစ်ဗိုလ်တွေလဲ မေးလိုပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့တွေ ဒီမိုသမားတွေကို အနောက်ဖက်ကို ပထွေးတော်တယ်လို့ အတင်းမပြောခင် . . ခင်ဗျားဟာ မိမိအသိုင်းအ၀န်းအတွက်၊ အများအကျိုးအတွက်ဘာတွေ လုပ်နေလဲဆိုတာ ပြန်ပြီးစဉ်းစားပါ။ မိမိကိုယ်တိုင်က အများအကျိုးအတွက်ဘာမှ မလုပ်ပဲ တခြားရဲဘော်တွေရှေ့မှာ ဆရာကြီးအထာနဲ့ ဒီမိုသမားတွေကို စောက်တင်းမပြောပါနဲ့။ အဲဒီလုပ်ရပ်က အရမ်းရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အလုပ်ဆိုတာ သတိထားပါ။
ကဲဒီသတင်းမှာ ကျုပ်တို့ရဲ့ ဘုရားကို မျိုးကန်းကုလားတွေက ဌာပနာဖေါက်သွားတယ်ဆိုပဲ။ မျိုးကန်းကုလားတွေကို ဒေါသထွက်မလား? ဆဲမလို့လား? ကုလားတွေကို ကံကြီးထိုက်ကုန်မယ်လို့ ပြောမလို့လား? အဲဒါတွေက အကျိုးရှိလား? သူတို့ထိုက်နဲ့ သူတို့ကံပဲဆိုပြီး မျက်နှာလွဲမလို့လား? အဲဒါတွေက အဖြစ်မရှိတဲ့ လူတွေရဲ့အလုပ်ဗျ။
ကဲ.. ကျုပ်တို့တွေ တိုင်းပြည်မစည်းလုံးသေးသမျှ .. တိုင်းပြည်အားနည်းနေသမျှ အခုလိုစော်ကားခံရမှာပဲ။ လက်တွေ့ကျကျ အများအကျိုးအတွက် ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင် ကျုပ်တို့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူ့ဘောင်ကြီးဟာ ဆင်းရဲနေဦးမှာပဲ။ ကုလားတွေ မျိုးကန်းသလို ကျုပ်တို့လဲ မျိုးကန်းလိမ့်မယ်။ စဉ်းစားပါဗျာ။
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ တက်ကနက်မြို့နယ် မြစ်နားရွာ အနီးရှိ နီလာစေတီတော် သုံးဆူမှ အကြီးဆုံး စေတီတော် ဌာပနာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ရက်က အမည်မသိသူများက ဖေါက်ထွင်း ယူဆောင်သွား ခဲ့သည်ဟု ရခိုင်အမျိုးသား တဦးက ပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ သွားကြည့်တော့ စေတီတော်မှာ ဘုရားဆီးမီး ပူဇော်တဲ့ ဂူပေါက်ကနေပြီး ဖေါက်ထွင်း ပြီး ဌာပနာကို ယူသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စေတီတော် ရင်ပြင်မှာ တက်ရောက် အိမ်ယာ ဆောက်လုပ် နေထိုင်သူ ဘင်္ဂလီတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
အဆိုပါ ဖေါက်ထွင်းမူအား ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များအား တိုင်ကြားသော်လည်း ယနေ့ထိ လာရောက် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အရေးယူခြင်းမရှိဟု သိရသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် နီလာမြို့နယ်မှ ဒုတိယ ဥက္ကဌ အာယု ဘင်္ဂလီကို နိရဉ္စရာမှ ဖုံးဖြင့် ဆက်သွယ်ပြီး မေးမြန်းရာ အဆိုပါ ကိစ္စကို သူအနေဖြင့် မသိရှိသေးဟု ဆိုကာ ဖုံးချသွားခဲ့သည်။
အဆိုပါ စေတီတော်ရင်ပြင်တွင် ဘင်္ဂလီမိသားစု ၆ စုခန့်မှ တက်ရောက် အိမ်ယာ ဆောက်လုပ် နေထိုင်နေပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးများလည်း ရောင်းချနေသည်ဟု နီလာကျေးရွာမှ အရပ်သား တဦးက ပြောသည်။
“ဘုရားပေါ်မှာ တက်ရောက်ပြီး အိမ်ယာ ဆောက်လုပ် တာတောင် မကသေးဘူး။ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ လည်း ရောင်းချနေ ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာကို သွားတိုင်ရင် ရန်ရှာမှာကို ကြောက်တဲ့ အတွက် ဘယ် ရခိုင်လူမျိုးမှ သွားမတိုင်ရဲပါဘူး။”
အဆိုပါ နီလာတောင်ပေါ်တွင် စေတီတော် သုံးဆူရှိပြီး ရှေ့ခေတ်ကတည်းက တည်ရှိနေသော သမိုင်းဝင်စေတီများ ဖြစ်ကြသည်။
မြစ်နားရွာမှ လူငယ် တဦးကလည်း “စေတီတော် ဌာပနာ ကိုလည်း ယူမယ်။ ပီးတော့ စေတီတော် ကိုလည်း အတွင်းကနေပြီး ဖြိုမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် သူတို့မှာ ပါဝင် ပါတယ်။ အပြင်က ဖြိ်ုရင် လူတွေ မြင်နိုင်တဲ့အတွက် သူတို့က ဌာပနာကို ဖေါက်ပြီး ခုလို ကြံစည်တာ ဖြစ်ပါတယ်။”� ဟု ပြော သည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံတွင် ရှေ့ဟောင်း စေတီပုထိုးတော်များ အများအပြား တည်ရှိပြီး တချို့မှာ ဖြိုဖျက်ခံ လိုက်ရသလို တချို့မှာလည်း ဖြိုဖျက်ခံရမည့် အနေအထားနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟု သိရသည်။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 4:01 AM
ခင်ဗျားပြောတဲ့ စကားတွေဟာ အမှန်တွေပဲ
ကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်။ ဗုဒ္ဒဘာဝင် တယောက်ဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာကို ကာကွယ်စောင့် ထိန်းရမယ့် တာဝန်ရှိတယ်။
စောက်သုံးမကျတဲ့နိုင်ငံရေးထဲမှာ ဗုဒ္ဒဘာသာဟာ ပဲကြီးလှော်ထဲကဆားလို
ဘေးကျပ်နံကျပ် ဖြစ်နေရတယ်။ အာဏာအားကိုးတဲ့စောက်စစ်ဗိုလ်တွေ နဲ့ ...ပြည်ပအားကိုးတဲ့စောက်ပြည်ပြေး..
ဒီမိုကရေစီ သူတောင်းစားတွေကြောင့်ခုလိုဖြစ်ရတာ ။။မြန်မာတွေ ဗုဒ္ဒဘာသာကို ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ကြပါ။
this is old trick ! everybody knew it !
Can't u guys do better ???? why acting like idiots all the time ?
low life ..low culture ..keep going n keep training low culture ..ur new generation will be other nation's servent !
because ur stretegies are out dated !!! htweeeee !!!
sout nyan kann dway ... kway sat pat that twar yat kya dot kwar !